Creamfields bụ otu n'ime Best ememme na Europe na UK nnukwu egwu music ememme. Ime ka ọtụtụ n'ime gị akụ ezumike na August na akwụkwọ a tiketi gaa oriri na nkwari!
Ha nkebi raara ruo n'ụlọ, EDM, Tekno, drum na bass, ọhụụ, akwa, na ndị ọzọ, eme Creamfields na-aga na-eme ememme maka egwu music Fans Britain.
Ememme afọ a nke 2019 na-abịa na ikuku nke iche. Ha ga-abụ nanị ndị ka a nọrọ iconic egwu supergroup Swedish House Mafia na UK. Ha ga-ga-mba Deadmau5 na mbụ arụmọrụ nke Cirez D & Adam Beyer.
Jikọọ na 70,000 ndị mmadụ na-abịa azụ ọ bụla Summer na-enwe immersive ọhụrụ nkebi, The Epic mmepụta etoju, ọkụ na-egosi, na pyrotechnics.
Anyị na-ahụ n'anya ememe a n'ihi na ụdị ihe mere. E wezụga ha ultra cryptic ozi na ha na-elekọta mmadụ media nyiwe n'elu ikpeazụ ụbọchị ole na ole, asịrị e circling banyere ihe 'The New Nkịtị’ nwere ike ịpụta. Lelee Peeji nke Facebook ịhụ ihe anyị pụtara.
N'ụzọ bụ ịhapụ omenala otu ma ọ bụ abụọ headliners a ụbọchị usoro, ndị na-ahazi nwere juru n'ọnụ n'elu nke ụgwọ maka ụbọchị nke ọ bụla na a akụ na ụba nke talent, tinyere amasị nke Erykah Badu, izu impala, Solange, Future, Cardi B, Interpol, Janelle Monáe, Robyn, na, Christine na Queens, James Blake, na Mac DeMarco.
Ememe Island 2019. Budapest, Hungary
Kedu ihe na-amasị anyị banyere ememme a na ihe na-eme ka ha dị iche nye anyị?
Ibu arọ ha tinyere na nka nakwa egwu. Enwere otutu ebe gụnyere circus, nkiri, ngosi nka nkeji iri na ise, na ọtụtụ ndị ọzọ. Artists na performers si n'ụwa nile na-egosipụta nkà ha. E nwekwara ohere maka Szitizens na nka-arụ ọrụ ọnụ iji ike-agaghị echefu echefu na ihe bara uru sere.
Ọ bụrụ na nke ahụ adịghị mma ezuru, na ha bụkwa eco-enyi na enyi! Ha na-anwa iburu ozi ahụ mgbe ọ bụla ha nwere ike ma rịọ ndị na-aga ememme ka ha nwee ike ịmata ihe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-festivals-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Creamfields #Europemusicfestival #MusicFestival #Mmiri #agwaetiti europetravel ememme longtrainjourneys Party trainjourney
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe